GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Zande Zulu
Olee ihe ị ga-eme ka gị na Chineke bụrụ enyi? Anyị elebala anya n’ihe ndị ị ga na-eme ka gị na Chineke dịrị n’ezigbo mma. Ihe ndị ahụ bụ:
Mata na aha Chineke bụ Jehova, na-akpọkwa ya aha a.
Na-agwa ya okwu mgbe niile n’ekpere, na-amụkwa Okwu ya, bụ́ Baịbụl.
Na-eme ihe ndị ga-eme ka obi dị Jehova mma.
Gị na Chineke ga-adị ná mma ma ị na-akpọ ya aha ya, na-ekpegara ya ekpere, na-amụ Okwu ya ma na-eme ihe ga-eme ya obi ụtọ
Ị̀ ga-asị na ị na-eme ihe ndị a anyị lebarala anya ka i nwee ike ịbụ enyi Chineke? È nwere ihe ndị i chere na i kwesịrị imezikwu? Ya bụrụ otú ahụ, i kwesịrị ịgbasi mbọ ike mezie ha n’ihi na ọ ga-abara gị uru.
Otu nwaanyị bi n’Amerịka aha ya bụ Jennifer kwuru, sị: “Mbọ ọ bụla mmadụ gbara ka ya na Chineke bụrụ enyi efughị ọhịa. Onye ya na Chineke dị ná mma na-erite ọtụtụ uru: ọ ga-atụkwasịkwu Chineke obi, ọ ga-aghọtakwa ụdị onye Chineke bụ. Nke ka nke bụ na ọ ga-ahụkwu Chineke n’anya, Chineke ahụkwuo ya n’anya. O nweghị ihe karịrị mmadụ na Chineke ịbụ enyi.”
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Chineke dịrị n’ezigbo mma, obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ inyere gị aka. Ha nwere ike ịna-abịa na nke gị ka gị na ha mụwa Baịbụl. Ha agaghị asị gị kwụọ ụgwọ. I nwekwara ike ịga ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ha. N’ebe ahụ, ị ga-ahụ ndị na-agbasi mbọ ike ka ha na Chineke dịrị ná mma, ha ga-anabatakwa gị nke ọma. * Ọ bụrụ na i mee ihe ndị a, obi ga-adị gị otú ọ dị otu ọbụ abụ, bụ́ onye sịrị: “Ma mụ onwe m, ịbịaru Chineke nso dị m mma.”—Abụ Ọma 73:28.
^ para. 9 Ọ bụrụ na ị chọrọ ka Onyeàmà Jehova bịa mụwara gị Baịbụl ma ọ bụ ka ị mata ebe Ụlọ Nzukọ Alaeze dị gị nso dị, biko, gwa Onyeàmà Jehova nyere gị magazin a ma ọ bụ gị agaa n’adres Ịntanet anyị bụ́ www.jw.org/ig. Ị gaa ebe ahụ, lee anya n’ala ala ebe e dere KPỌTỤRỤ ANYỊ.
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu ỤLỌ NCHE Disemba 2014 | Gị na Chineke Nwere Ike Ịdị ná Mma